​सानिमा बैंकको नयाँ डेबिट कार्ड, नेपाल र भारतमा प्रयोग गर्न सकिने
काठमाडौं माघ १८ गते । सानिमा बैंकले नेपाल र भारतका एटिएम र व्यापारिक केन्द्रमा प्रयोग गर्न सकिने भिसा ब्राण्डको डेबिट कार्डको शुभारम्भ गरेको छ । बैंकले आइतबारदेखि नयाँ सेवाको सुरुवात..
​सिन्धु विकास बैंकको ७.५ प्रतिशत बोनस सेयर पारित, तीन सञ्चालक चयन
काठमाडौं माघ १८ गते । सिन्धु विकास बैंकको पाँचौ वाषिर्क साधारणसभाले सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको ७.५ प्रतिशत बोनस सेयर र त्यसको कर प्रयोजनका लागि ०.३९ प्रतिशत नगद लाभांस पारित गरेको..
​सिटिजन्स बैंकले १३ प्रतिशत व्याजमा विना धितो १५ लाखसम्म कर्जा दिने
काठमाडौं माघ १८ गते । सिटिजन्स बैंकले १५ लाख रुपैयाँसम्म विनाधितो कर्जा दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सामान मासिक किस्तामा पाँच वर्ष भित्र भुक्तानी गर्ने गरी विना धितो..
​एनआइसी एसिया बैंकको नाफा दुई करोड ४७ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं, माघ १६ गते । एनआइसी एसिया बैंकको नाफा दुई करोड ४७ लाख रुपैयाँले घटेको छ । बैंकले पुससम्म ३६ करोड ६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको हो । बैंकको खुद..
​प्रभु बैंकको नाफा पुस मसान्तसम्म ५४ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं, माघ १६ गते । यस आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्ममा प्रभु बैंकले नाफा ५४ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । अघिल्लो बर्षको पुसमा १९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको प्रभु बैंकको..
बैंकले चेक क्लियरिङ गर्दा शुल्क लिने, चेक फिर्ता भएमा पनि १०० जरिवाना
काठमाडौं माघ १६ गते । अबदेखि बैंकहरुको चेक राफसाफ (क्लियरिङ) गर्दा पनि शुल्क लाग्ने भएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) लाई बुझाउनु पर्ने शुल्क ग्राहकबाटै उठाउन पाइने व्यवस्था..
​प्रभु बैंकले ग्रान्ड बैंक नेपाल खरिद गर्ने समझदारी
काठमाडौं माघ १६ गते । पछिल्लो पटक राष्ट्रियस्तरको वाणिज्य बैंक बनेको प्रभु बैंकले अर्को वाणिज्य बैंक ग्रान्ड बैंक नेपाल खरिद (एक्विजिसन) गर्ने भएको छ। यसका लागि दुवै बैंकबीच बिहीबार प्रारम्भिक..
एभरेष्ट बैंकको नाफा ७७ करोड १२ लाख
काठमाठौं माघ १५ गते । एभरेष्ट बैंकले पुस २०७१ पुस मसान्तसम्ममा ७७ करोड १२ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा बैंकले ६७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ..
​इन्भेष्टमेन्ट बैंक पुस मसान्तसम्म ९६ करोड ६० लाख रुपैयाँ नाफामा
काठमाठौं माघ १५ गते । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा ९६ करोड ६० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा बैंकले ९३ करोड ८० लाख..
​कृषि विकास बैंकले १५ प्रतिशत लाभांस दिने
काठमाडौं माघ १५ गते । कृषि विकास बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयर धनीलाई १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । विहीबार वसेको बैंकको संचालक समितको बैंठकले सो निर्णय गरेको..
​कैलास विकास बैंकको नाफा ११ करोड १२ लाख
काठमाडौं माघ १४ । कैलास विकास बैंकले चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तमा नाफा ४८ प्रतिशतले बढाएको छ । बैंकले खुद नाफा ११ करोड १२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकले खुद..
​गण्डकी विकास बैंकको पुस मसान्तसम्म नाफा साढे ६ करोड
काठमाडौं माघ १४ । पोखराको न्यूरोडमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गण्डकी विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ३ अर्व ७० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ३ अर्व २५ करोड रुपैयाँ..
​अरुण फाइनान्सलाई नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा समस्याग्रस्त घोषणा, ८० प्रतिशत खराब कर्जा
काठमाडौं माघ १३ । सुनसरीको धरानमा मुख्य कार्यालय रहेको अरुण फाइनान्स कम्पनीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । स्थलगत निरिक्षणमा भएको राष्ट्र बैंकको टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा समस्याग्रस्त..
एनसीसी बैंकको नाफा २५ करोड
काठमाडौं माघ १३ । एनसीसी बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा बैंकले १६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको..
पश्चिमाञ्चल डेभलपमेण्ट बैंकको २० प्रतिशत बोनस शेयर स्वीकृत
<img alt="\_&quot;\_&quot;" data-cke-saved-src="/uploads/images/pdbl.gif" src="/uploads/images/pdbl.gif" style="margin: 6px; float: left;" height:106px;="" margin:6px;="" width:109px\_"="">बुटवल माघ १२ । पश्चिमाञ्चल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडले गत वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई २० प्रतिशत बोनस शेयर दिने भएको छ । संचालक..
​सानिमा बैंक २७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ नाफामा
काठमाडौं माघ १२ । सानिमा बैंकले चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा २७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा बैंकले १९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ नाफा..
​ग्लोवल आइएमई बैंकले पुस मसान्तसम्म ५४ करोड १८ लाख नाफा कमायो
काठमाडौं माघ १२ । ग्लोवल आइएमई बैंकले चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा ५४ करोड १८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा बैंकले ५३ करोड २८ लाख रुपैयाँ..
​बिओकेको छ महिनामा नाफा ३३ करोड रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं माघ ११ । बैंक अफ काठमाण्डूले चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमास (साउनदेखि पुस मसान्तसम्म) मा खुद नाफा आठ करोठ रुपैयाँले बढाएको छ । बैंकले पुससम्म ३३ करोड सात लाख..
प्राइम बैंकको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ निर्वाचित
काठमाडौं माघ ८ । प्राइम बैंकको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन । बैंकको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो । हालै सम्पन्न बैंकको सातौ वाषिर्क साधाराणसभाले..
​मेगा बैंकबाट २ करोड ९ लाख ठग्ने थाइल्याण्डबाट पक्राउ
काठमाडौं माघ ७ । किर्ते गरी मेगा बैंकमा रहेको टुरिज्म डेभलप्मेन्ट बैंकको खाताबाट २ करोड ९ लाख रुपैयाँ निकाल्ने अभियुक्त सञ्जय ढकाललाई प्रहरीले थाइल्याण्डको बैंककबाट पक्राउ गरेको छ ।ढकालले टुरिज्म..
मुक्तिनाथको नाफा १६ करोड
काठमाडौं माघ ५ । मुक्तिनाथ विकास बैङ्कले आव २०७१/७२ को पुस मसान्तसम्म रू. १६ करोड ११ लाख सञ्चालन नाफा आर्जन गरेको छ । सो अवधिमा बैङ्कको निक्षेप सङ्कलन रू. ५ अर्ब..
​सिटिजन्स बैंकको नाफा २७ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं माघ ५ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा आफ्नो नाफा १८ दशमलव ३६ प्रतिशतले बढाएको छ। बैंकले यो अवधिमा २७ करोड ९८ लाख ७२ हजार..
मनास्लु बैंकको तीन लाख कित्ता हकप्रद सेयर निस्काशन
काठमाडौं माघ ४ । गोरखामा मुख्य कार्यालय रहेको मनास्लु विकास बैंकले आइतबारदेखि तीन लाख कित्ता हकप्रद सेयरका लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ । बैंकले हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीको प्रति चार..
​कुमारी बैंकको वित्तीय साक्षरता तालिम
काठमाडौं माघ ४ । कुमारी बैङ्कले बुढानिलकण्ठमा वित्तीय साक्षरता तालिम सञ्चालन गरेको छ । नेपाल बैङ्किङ्ग इन्स्टिच्यूटको संयोजकत्वमा भएको उक्त तालिममा विभिन्न सहकारीका महिला कर्मचारीहरू तथा स्थानीय वासिन्दाहरू गरी ५५..
​भृकुटी डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा १२ करोड
काठमाडौं माघ ४ । भृकुटी डेभलपमेन्ट बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा ११ करोड ८४ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको छ । यो गतवर्षको यसै अवधिकोभन्दा ६५ प्रतिशतले बढी हो..
​सिटी डेभलपमेन्ट बैंकको पुस मसान्तसम्म आठ करोड ६० लाख सञ्चालन नाफा
काठमाडौं माघ १ । सिटी डेभलपमेण्ट बैंकले पुस मसान्तसम्म आठ करोड ६० लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको छ। बैंकले चालु बर्षको दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्ममा चार अर्ब ३३ करोड निक्षेप संकलन..
काठमाडौं माघ १ । मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको दोस्रो वार्षिक साधारण काठमाण्डौमा सम्पन्न गरेको छ । कारोवार प्रारम्भ गरेको पहिलो बर्षमा नै १० जिल्लामा १५ वटा शाखा मार्फत आफ्नो सेवा..
यती बैंकले ल्यायो कर नलाग्ने मुद्दति खाता
काठमाडौं, माघ १ । यती डेभलपमेण्ट बैंकले माघ २ गतेदेखि लागु हुने गरी निक्षेपकर्ताहरुको लागि आर्कषक २५ महिने ट्याक्स फ्रि फिक्स डिपोजिट खाता संचालनमा ल्याएको छ । यो योजनामा निक्षेपकर्ताहरुले ८.५०..
एभरेष्ट बैङकले उपत्यकामा थप्योे ३ एटिएम, एटिएमको संख्या ८० पुग्यो
काठमाडौं पुस ३० । ग्राहकहरुलाई सर्वसुलभ बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ एभरेष्ट बैङ्कले काठमाडौंमा ३ ठाँउमा एकसाथ एटिएम सेवा प्रारम्भ गरेको छ । पुतलिसडकको शेयरमार्केट कम्प्लेक्स, त्रिपुरेश्वर चोक र..
​मालिका बिकास बै‌कको पाँच प्रतिसत बोनस सेयर पछि चुक्तापूँजी २३ करोड नाघ्ने
काठमाडौं पुष २८ । मालिका विकास बैंकले पाँच प्रतिसत बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकको गत विहीबार बसेको सञ्चालक समितिले पाँच प्रतिसत बोनस सेयरको प्रस्ताव गरेको हो । नेपाल..
Results 1896: You are at page 62 of 64